" မေ၊ မီ၊ မွိုငျ၊ မှေး၊ မမ "
မွနျမာ့စာပသေမိုငျးတဈလြောကျ ကြျောကွားခဲ့သော "မ" ငါးလုံး ဝတ်တုမြား
(၁) မေ ~ ဒဂုနျတာရာ (၁၉၄၁ ခုနှဈ)
"မေ ဝတ်တုကို ဖတျရသညျမှာ ရှမျပိနျအရကျကို သောကျရသညျနှငျ့ တူလသေညျ" ဆိုပွီး သခငျဗဟိနျး အမှာစာရေးပေးထားတဲ့ အတိုငျးလေးပဲ။
ကောလိပျကြောငျးသူလေး မေ / လူကုံထံ အသိုငျးကို လှောငျပွောငျခငျြနသေော မေ အဖွဈကနေ သူကိုယျတိုငျ လူကုံထံအသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာပဲ မှပြေ့ျောသှားမိပုံတှေ။ လောကရဲ့ သဘောသဘာဝဖွဈတဲ့ ရမကျနှံတှထေဲက ရုနျးမထှကျနိုငျပဲ ပကျြစီးသှားပုံတှေ။ အမှားတှေ အမှနျမပွငျနိုငျတော့ဘဲ နောကျဆုံးအခြိနျထိ ပစ်စညျးဥစ်စာ ရမကျတှကွေားထဲ နှဈမွှပျသှားပုံတှကေို ရေးပွသှားတဲ့ ဝတ်တုကောငျးလေးတဈအုပျ။
"အကောငျးကိုရှာ၏ ။ အကောငျးကားမရှိတော့" - (အရေးအသားတှကေတော့ နညျးနညျးကွမျးတယျ)
Pdf link – https://www.mediafire.com/download/g2v4hgp63m6hlwj
(၂) မီ ~ ကွညျအေး (၁၉၄၈ ခုနှဈ)
"မီဟာလှတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါ့ထကျပိုတာတဈခုရှိတယျ။ ဘာလဲတော့ မသိဘူး။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ မီ့မှာ ကြှနျတေျာ့ကို ရူးစတေဲ့ အရာတဈခု ရှိတယျ။"
မီဟာ လှတယျ။ ရကျရောတယျ။ သှေးအေးတယျ။ လြှို့ဝှကျခကျြတှမြေားတယျ ဆိုတဲ့အတိုငျး မီ့အလှ မီ့ဂုဏျတှအေောကျမှာ နဈမွောသှားသော ပုရိသတဈစုရဲ့ အခဈြတှေ အမုနျးတှေ အငွိုးတှကေို ဆိုလိုရငျးထိထိရောကျနဲ့ ရေးပွသှားသောစာအုပျ။ မီ ဇာတျကောငျ ကို နားလညျရခကျသညျ့အတိုငျး နောကျဆုံးအခြိနျထိ နားမလညျနိုငျခဲ့ဘူး။ ဘလှဝငျး ကို ဘယျသူမှနျးတောငျ မသိလိုကျရ။
"မီ မီ မီ ... မီဟာ … မီမဟုတျဘူး။ မီးပဲ ... မီးပဲ ငါ့ကိုရှို့နတေဲ့ မီးပဲ ... မီလေးရယျ" - (ကိုယျခဏ ခဏ ဖတျဖွဈတဲ့စာအုပျလေး)
Pdf link - https://www.mediafire.com/download/mr1662hva1lkl28
(၃) မွိုငျ ~ ဗနျးမျောတငျအောငျ
"အနှိပျစကျခံရမှာ ကွောကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ အသတျခံရမှာ ကွောကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ တိုးတကျမူနဲ့ အမှနျတရားဘကျက ရပျတညျမယျ့လူတှသော သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ ပျေါပေါကျမလာခဲ့ရငျ လူ့လောကဟာ တိရစ်ဆာနျလောကသာသာလောကျပဲ ရှိနဦေးတော့မှာပေါ့ မွိုငျရယျ"
အထကျတနျးလှာက ရပေျေါဆီ နခေဲ့ရသော သူဌေးသမီးလေး မွိုငျနဲ့ သတငျးစာသမားလေး ကိုတငျဦး တို့ရဲ့ဇာတျလမျး။ ခဈြခွငျးနဲ့အစပွုခဲ့ကွပမေယျ့ မတူညီတဲ့ လူတနျးစားနှဈခု ရဲ့ သဘောထားကှဲလှဲမှုတှနေဲ့ အိမျထောငျရေး မသာယာနိုငျပုံတှေ ရေးပွပေးသှားတဲ့ စာအုပျကောငျးလေး။ အသားကနြတေဲ့ မွိုငျ့ ရဲ့ စိတျဓာတျကို ကိုတငျဦးက ခှငျ့လှတျနိုငျမလား ပွုပွငျပေးနိုငျမလားဆိုတာတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျ။
ဆရာဗနျးမျောတငျအောငျရဲ့ လကျစှမျးအတိုငျး သတငျးစာသမားလေး ကိုတငျဦး ရဲ့ဇာတျကောငျကို ရေးပွသှားတာ ဆရာကွီးရဲ့ ကိုယျပှား ပွယုဒျ အဖွဈတောငျ သတျမှတျကွပါတယျ။ - (နိုငျငံရေးဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ လလေ့ာဖို့ တာဝနျရှိတယျ ဆိုတာမြိုး သိလိုကျရတယျ။)
Pdf link - https://www.mediafire.com/download/k3nj8dcm8sc3ym6
(၄) မှေး ~ ခငျနှငျးယု (၁၉၈၇ ခုနှဈ ခနျ့မှနျး)
"သာမနျကွညျ့လြှငျ မှေးသညျ အိမျထောငျရေး အခဈြဇာတျလမျးတဈခုဟု ဆိုနိုငျပါသျောလညျး ကြှနျမသညျ တိုငျးခဈြပွညျခဈြ မြိုးခဈြစိတျဓာတျကို အခွခေံခဲ့ပါသညျ"
ဆရာမ ခငျနှငျးယု တီဘီရောဂါနဲ့ India ကိုဆေးလာရောကျကုသရာမှ မှေး နှငျ့ အတှတျတို့ ပွနျလညျဆုံစဉျးခဲ့ကွပုံ။ ငယျစဉျကလေးဘဝ ထဲက အတူတကှ ကွီးပွငျးလာခဲ့ပွီး "မ ကညျြးတနျလေး ဘဝထဲက မှေး" အပျေါထားတဲ့ အတှတျရဲ့ မတ်ေတာတရားတှကေို တှရေ့တယျ။
"မှေးက မိနျးမပမေယျ့ မိနျးမမဆနျပါဘူး" ဆိုတဲ့ အတိုငျး မှေးရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြပွတျသားပုံတှေ မိသားစုအပျေါ တာဝနျကပြေုံတှေ။ အိမျထောငျရှငျမကောငျး ပီသပုံတှေ တှရေ့တယျ။ အခဈြကို ဖှငျ့မပွောတကျပဲ အမွဲနှောငျ့နှေး နောကျကောကျ ကတြတျတဲ့ "အတှတျ" အတှကျလညျး ရငျမောရ သနားဂရုဏာ သကျရတယျ။
အရငျခတျေက တဈအုပျစီထှကျခဲ့ပမေယျ့ (မှေး + ကုသိုလျကွမ်မာမမီပါခဲ့ + အတှတျရေ + ကြှနျတျောတငျအောငျထှနျး) ဒီဘကျခတျေမှာတော့အကုနျလုံးပေါငျးပွီးတဈအုပျထှကျထားပေးတယျ။ မိသားစုရေး အခဈြရေး အိမျထောငျရေး နိုငျငံရေး အကွောငျးတို့ကိုတဈစတေ့ဈစောငျး ဖျောပွပေးသှားသော စာအုပျကောငျး။ - (မှေး ဇာတျလမျးဆိုပမေယျ့ အတှတျဇာတျလမျး လို့တောငျ ထငျမိတယျ)
Pdf link - https://www.mediafire.com/download/5n5mvc65ct5dt0w
(၅) မမ ~ မွသနျးတငျ့ (၁၉၆၁ ခုနှဈ)
"မငျးကတျော အသိုငျးအဝိုငျးထဲက မမ . . .
ပညာရှိပွီး နာမညျဂုဏျသတငျး / လှပသောဂုဏျသတငျး တို့နဲ့ ကြျောစောလှသော မမ . . .
လူတကာ လေးစားရသော မမ . . ."
ထိုသို့သော မမတဈယောကျ အခဈြကို အိမျထောငျဘကျအပွငျ အခွားတဈယောကျဆီမှာပါ ရှာမိသှား သောအခါ။ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးသကျထှနျးရဲ့ ခှငျ့လှတျနိုငျစှမျးတှေ ကိုသကျဆှရေဲ့ အခဈြကွီးပုံတှနေဲ့ မမ တဈယောကျ ဝခှေဲမရ မပွတျသားနိုငျပုံတှေ။ သစ်စာတရား မတ်ေတာတရား ရာဂအမှောငျ တှေ အကွောငျး တဈဦးဆီကိုယျစားပွုပွီးရေးပွသှားသော စာအုပျကောငျး။ ဇာတျလမျးအသှားအလာတှေ စာသားတှေ ဇာတျသိမျးသှားပုံတှေ အရမျးကွိုကျတယျ။
"တကယျတော့ သညျလောကတှငျ ယုတျမာမှုကို ပိုမို၍ ဆိုးသော ယုတျမာမှုဖွငျ့ တုံ့ပွနျဖို့သာကောငျးတော့သညျ" - (ဇာတျကောငျတှေ ထဲမှာ ကိုယျတိုငျမြောသှားသလို ခံစားရတယျ။)
Pdf link - https://bit.ly/3916AA
ဒီတဈပတျ ပိတျရကျမှာတော့ စာအုပျကောငျးလေးတှနေဲ့ အခြိနျကုနျကွရအောငျဗြို့။
မြန်မာ့စာပေသမိုင်းတစ်လျောက် ကျော်ကြားခဲ့သော "မ" ငါးလုံး ဝတ္တုများ
" မေ၊ မီ၊ မြိုင်၊ မွှေး၊ မမ "
(၁) မေ ~ ဒဂုန်တာရာ (၁၉၄၁ ခုနှစ်)
"မေ ဝတ္တုကို ဖတ်ရသည်မှာ ရှမ်ပိန်အရက်ကို သောက်ရသည်နှင့် တူလေသည်" ဆိုပြီး သခင်ဗဟိန်း အမှာစာရေးပေးထားတဲ့ အတိုင်းလေးပဲ။
ကောလိပ်ကျောင်းသူလေး မေ / လူကုံထံ အသိုင်းကို လှောင်ပြောင်ချင်နေသော မေ အဖြစ်ကနေ သူကိုယ်တိုင် လူကုံထံအသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာပဲ မွေ့ပျော်သွားမိပုံတွေ။ လောကရဲ့ သဘောသဘာဝဖြစ်တဲ့ ရမက်နွံတွေထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်ပဲ ပျက်စီးသွားပုံတွေ။ အမှားတွေ အမှန်မပြင်နိုင်တော့ဘဲ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ပစ္စည်းဥစ္စာ ရမက်တွေကြားထဲ နှစ်မြှပ်သွားပုံတွေကို ရေးပြသွားတဲ့ ဝတ္တုကောင်းလေးတစ်အုပ်။
"အကောင်းကိုရှာ၏ ။ အကောင်းကားမရှိတော့" - (အရေးအသားတွေကတော့ နည်းနည်းကြမ်းတယ်)
(၂) မီ ~ ကြည်အေး (၁၉၄၈ ခုနှစ်)
"မီဟာလှတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါ့ထက်ပိုတာတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာလဲတော့ မသိဘူး။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် မီ့မှာ ကျွန်တော့်ကို ရူးစေတဲ့ အရာတစ်ခု ရှိတယ်။"
မီဟာ လှတယ်။ ရက်ရောတယ်။ သွေးအေးတယ်။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေများတယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း မီ့အလှ မီ့ဂုဏ်တွေအောက်မှာ နစ်မြောသွားသော ပုရိသတစ်စုရဲ့ အချစ်တွေ အမုန်းတွေ အငြိုးတွေကို ဆိုလိုရင်းထိထိရောက်နဲ့ ရေးပြသွားသောစာအုပ်။ မီ ဇာတ်ကောင် ကို နားလည်ရခက်သည့်အတိုင်း နောက်ဆုံးအချိန်ထိ နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘလှဝင်း ကို ဘယ်သူမှန်းတောင် မသိလိုက်ရ။
"မီ မီ မီ ... မီဟာ … မီမဟုတ်ဘူး။ မီးပဲ ... မီးပဲ ငါ့ကိုရှို့နေတဲ့ မီးပဲ ... မီလေးရယ်" - (ကိုယ်ခဏ ခဏ ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်လေး)
(၃) မြိုင် ~ ဗန်းမော်တင်အောင်
"အနှိပ်စက်ခံရမှာ ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အသတ်ခံရမှာ ကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးတက်မူနဲ့ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်မယ့်လူတွေသာ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ရင် လူ့လောကဟာ တိရစ္ဆာန်လောကသာသာလောက်ပဲ ရှိနေဦးတော့မှာပေါ့ မြိုင်ရယ်"
အထက်တန်းလွှာက ရေပေါ်ဆီ နေခဲ့ရသော သူဌေးသမီးလေး မြိုင်နဲ့ သတင်းစာသမားလေး ကိုတင်ဦး တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်း။ ချစ်ခြင်းနဲ့အစပြုခဲ့ကြပေမယ့် မတူညီတဲ့ လူတန်းစားနှစ်ခု ရဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မသာယာနိုင်ပုံတွေ ရေးပြပေးသွားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး။ အသားကျနေတဲ့ မြိုင့် ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ကိုတင်ဦးက ခွင့်လွှတ်နိုင်မလား ပြုပြင်ပေးနိုင်မလားဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ လက်စွမ်းအတိုင်း သတင်းစာသမားလေး ကိုတင်ဦး ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကို ရေးပြသွားတာ ဆရာကြီးရဲ့ ကိုယ်ပွား ပြယုဒ် အဖြစ်တောင် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ - (နိုင်ငံရေးဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ လေ့လာဖို့ တာဝန်ရှိတယ် ဆိုတာမျိုး သိလိုက်ရတယ်။)
(၄) မွှေး ~ ခင်နှင်းယု (၁၉၈၇ ခုနှစ် ခန့်မှန်း)
"သာမန်ကြည့်လျှင် မွှေးသည် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဟု ဆိုနိုင်ပါသော်လည်း ကျွန်မသည် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံခဲ့ပါသည်"
ဆရာမ ခင်နှင်းယု တီဘီရောဂါနဲ့ India ကိုဆေးလာရောက်ကုသရာမှ မွှေး နှင့် အတွတ်တို့ ပြန်လည်ဆုံစဉ်းခဲ့ကြပုံ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ ထဲက အတူတကွ ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီး "မ ကျည်းတန်လေး ဘဝထဲက မွှေး" အပေါ်ထားတဲ့ အတွတ်ရဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို တွေ့ရတယ်။
"မွှေးက မိန်းမပေမယ့် မိန်းမမဆန်ပါဘူး" ဆိုတဲ့ အတိုင်း မွှေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားပုံတွေ မိသားစုအပေါ် တာဝန်ကျေပုံတွေ။ အိမ်ထောင်ရှင်မကောင်း ပီသပုံတွေ တွေ့ရတယ်။
အချစ်ကို ဖွင့်မပြောတက်ပဲ အမြဲနှောင့်နှေး နောက်ကောက် ကျတတ်တဲ့ "အတွတ်" အတွက်လည်း ရင်မောရ သနားဂရုဏာ သက်ရတယ်။
အရင်ခေတ်က တစ်အုပ်စီထွက်ခဲ့ပေမယ့် (မွှေး + ကုသိုလ်ကြမ္မာမမီပါခဲ့ + အတွတ်ရေ + ကျွန်တော်တင်အောင်ထွန်း) ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတစ်အုပ်ထွက်ထားပေးတယ်။ မိသားစုရေး အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး နိုင်ငံရေး အကြောင်းတို့ကိုတစ်စေ့တစ်စောင်း ဖော်ပြပေးသွားသော စာအုပ်ကောင်း။
(မွှေး ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် အတွတ်ဇာတ်လမ်း လို့တောင် ထင်မိတယ်)
(၅) မမ ~ မြသန်းတင့် (၁၉၆၁ ခုနှစ်)
"မင်းကတော် အသိုင်းအဝိုင်းထဲက မမ . . .
ပညာရှိပြီး နာမည်ဂုဏ်သတင်း / လှပသောဂုဏ်သတင်း တို့နဲ့ ကျော်စောလှသော မမ . . .
လူတကာ လေးစားရသော မမ . . ."
ထိုသို့သော မမတစ်ယောက် အချစ်ကို အိမ်ထောင်ဘက်အပြင် အခြားတစ်ယောက်ဆီမှာပါ ရှာမိသွား သောအခါ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးသက်ထွန်းရဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းတွေ ကိုသက်ဆွေရဲ့ အချစ်ကြီးပုံတွေနဲ့ မမ တစ်ယောက် ဝေခွဲမရ မပြတ်သားနိုင်ပုံတွေ။ သစ္စာတရား မေတ္တာတရား ရာဂအမှောင် တွေ အကြောင်း တစ်ဦးဆီကိုယ်စားပြုပြီးရေးပြသွားသော စာအုပ်ကောင်း။ ဇာတ်လမ်းအသွားအလာတွေ စာသားတွေ ဇာတ်သိမ်းသွားပုံတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်။
"တကယ်တော့ သည်လောကတွင် ယုတ်မာမှုကို ပိုမို၍ ဆိုးသော ယုတ်မာမှုဖြင့် တုံ့ပြန်ဖို့သာကောင်းတော့သည်" - (ဇာတ်ကောင်တွေ ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်မျောသွားသလို ခံစားရတယ်။)
ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်မှာတော့ စာအုပ်ကောင်းလေးတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ကြရအောင်ဗျို့။
Read times Last modified on Friday, 22 January 2021 10:41